Dead or Alive | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! Dead or Alive | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ဤသည် NetEnt powered slot ကအမေရိကန်များ၏တောရိုင်းအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ 20 ရာစုရဲ့ start န်းကျင်အဲဒီအခြိနျရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်. ထိုကဲ့သို့သော Billy အဆိုပါ Kid နှင့်ယေရှဲဂျိမ်းအဖြစ်ရာဇဝတ်သားလိုခငျြခဲ့ကြသည့်အခါအဆိုပါဂိမ်းထိုခေတ်ကာလ၌ကြာ Dead or Alive. အဆိုပါအလွန်အမင်းကြိုး slot ကမှာကစားနိုင်ပါတယ် slot နှစ်ခုဖုန်းကိုသိုက်လောင်းကစားရုံ.
Dead or Alive များ၏ရေးသားသူအကြောင်း
NetEnt အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် 1996 ထိုသို့ထက်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည် 200 အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအပေါ်လောင်းကစားရုံဂိမ်း. ဤသည် slot ကမှာကစားရန်ရရှိနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအခြားသာလွန်သောအရည်အသွေးကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် slot နှစ်ခုဖုန်းကိုသိုက်လောင်းကစားရုံ.
ဤသည်မှာကစားနိုင်ပါတယ်ထားတဲ့ငါး reels ကိုး payline slot ကဖြစ်ပါတယ် slot နှစ်ခုဖုန်းကိုသိုက်လောင်းကစားရုံ 9p ထံမှ£ 18 တစ်လှည့်ဖျားရန်. အဆိုပါဂိမ်းတောရိုင်းအနောက်ခေတ်ကနေအကြီးအကျယ်ဆွဲယူခြင်းနှင့်သင်ဖရိုဖရဲဘဝမှမြင်ကွင်းများနှင့်အသံများကိုအမျိုးအစားအားလုံးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်. အဆိုပါ reels သင်သည်ငယ်လေးတစ်မြို့မှာဖြတ်ပြီးလာစေခြင်းငှါသစ်သားဘုတ်အတွင်း fixed နေကြတယ်. ကြောင်းဘုတ်အဖွဲ့တွင်, သင်တစ်ဦးလိုပိုစတာ၏ပုံ collage အဖြစ်ကျည်ဆံများကလုပ်ပေါက်တွေကိုတွေ့မြင်. ကနေပုံမှန်ကတ်ကို icon များ 10 Ace ကိုမှအောက်ပိုင်းတန်ဖိုးကို icon များဖြစ်ကြသည်. မြင့်မားတန်ဖိုးကို icon တွေကိုတစ်ဦးဝီစကီရိုက်ချက်များမှာ, တစ်ဆယ်ဂါလံဦးထုပ်, တစ်ရဲအရာရှိရဲ့တံဆိပ်, ယင်း၏ holster နှင့်ကောင်းဘွိုင်ဖိနပ်အတွင်းတွင်ဖွင့်မယ့်သေနတ်. အဆိုပါရိုင်းပုလိုပိုစတာဖြစ်ပါတယ်ကူးပစ္စတိုအိုင်ကွန်တရံရဲ့အဓိကအင်္ဂါရပ်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သောဂိမ်း၏ကြဲဖြန့်သင်္ကေတများပင်ဖြစ်သည်.
၏ဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ် slot နှစ်ခုဖုန်းကိုသိုက်လောင်းကစားရုံ ဂိမ်းတွေဟာ:
အခမဲ့လှည့်ဖျား- သင်ကြဲဖြန့် icon တွေကိုသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဆင်းသက်လျှင်ဒီ feature အစပျိုးနေသည်. သင်နှင့်အတူဆုခခြံနေကြတယ် 12 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးတစ်ဦး2ကြိမ်မြှောက်ကိန်း. အဆိုပါပတ်ပတ်လည်နှေးစတင်နှင့်အတူစတင်ပေမယ့်မကြာမီအလွန်အကျိုးအမြတ်ပတ်ပတ်လည်အသွင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်. အဆိုပါအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းနိုင်သောရိုင်း၏အသီးအသီးတို့သည်အင်္ဂါရပ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အနေအထားတွင်သော့ခတ်တဲ့စေးကပ်ရိုင်းသို့လှည့်နဲ့ဖြစ်နေဆဲ. အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များအသီးသီးတို့ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရမ်းပြေးများငါးခုသီးခြားလိုပိုစတာနှင့်အတူကြွလာ. သင်ကအင်္ဂါရပ်နေစဉ်အတွင်းငါး reels ၏တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်တစ်ဦးအလိုပိုစတာလေယာဉ်ဆင်းသက်ငါးအပိုဆောင်းအခမဲ့လှည့်ခြင်းများခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်. အဆိုပါအင်္ဂါရပ်လည်းဆင်းသက်ခြင်းဖြင့် retriggered နိုင်ပါသည်3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေ.
အဆိုပါ slot နှစ်ခုဖုန်းကိုသိုက်လောင်းကစားရုံ ဂိမ်းကိုသာရှိပါတယ်9paylines ပေမယ့်ကိုအနိုင်ပေး paylines တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူအခြားမည်သည့် slot ကထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်.